45s Sajid Javid: &#39;Onye ozi ọ bụla na-akwanyere onwe ya ùgwù&#39; ga-ajụ ihe PM chọrọ images and subtitles
Ọ bụ nnukwu ihe ùgwù ije ozi dịka onye isi oche ndị nlekọta ihe ma, mgbe m nwere obi uto na onye isi ala chọrọ ịtụgharịrị m, enweghị m ike ịnabata ọnọdụ ndị ahụ nke o kechiri. Ya mere enwere m mmetụta na a hapụrụ m na-enweghị nhọrọ ọzọ karịa ịhapụ arụkwaghịm. Ugbu a, onye nọchiri m nwere nkwado m zuru oke na praịm minista na-aga n'ihu iji nwee nkwado zuru oke, dịka gọọmentị na-eme. Ọnọdụ ndị agbakwunyere bụ ihe achọrọ ka m dochie ndị ndụmọdụ m niile gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Know mara, ndị a bụ ndị rụsiri ọrụ ike n'ụzọ siri ike n'aha, ọ bụghị naanị gọọmentị, kamakwa mba dum, rụrụ ọrụ dị egwu. Enweghị m ike ịnabata ọnọdụ ndị ahụ. Ekwetaghị m na onye ozi ọ bụla na-akwanyere onwe ya ùgwù ga-anabata ọnọdụ ndị dị otú ahụ ya mere, ya mere, enwere m mmetụta kachasị mma ime bụ ịga.
Sajid Javid: &#39;Onye ozi ọ bụla na-akwanyere onwe ya ùgwù&#39; ga-ajụ ihe PM chọrọ
< start="0.48" dur="3.26"> Ọ bụ nnukwu ihe ùgwù ije ozi dịka onye isi oche ndị nlekọta ihe >
< start="3.74" dur="2.28"> ma, mgbe m nwere obi uto na onye isi ala >
< start="6.039" dur="3.621"> chọrọ ịtụgharịrị m, enweghị m ike ịnabata ọnọdụ ndị ahụ >
< start="9.66" dur="1.28"> nke o kechiri. >
< start="10.94" dur="3.159"> Ya mere enwere m mmetụta na a hapụrụ m na-enweghị nhọrọ ọzọ karịa ịhapụ arụkwaghịm. >
< start="14.46" dur="4.02"> Ugbu a, onye nọchiri m nwere nkwado m zuru oke na praịm minista na-aga n'ihu >
< start="18.48" dur="2.1"> iji nwee nkwado zuru oke, dịka gọọmentị na-eme. >
< start="21.44" dur="3.9"> Ọnọdụ ndị agbakwunyere bụ ihe achọrọ ka m dochie >
< start="25.349" dur="1.43"> ndị ndụmọdụ m niile gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. >
< start="26.779" dur="3.051"> Know mara, ndị a bụ ndị rụsiri ọrụ ike n'ụzọ siri ike >
< start="29.83" dur="2.08"> n'aha, ọ bụghị naanị gọọmentị, kamakwa mba dum, >
< start="31.91" dur="1.03"> rụrụ ọrụ dị egwu. >
< start="33.38" dur="2.24"> Enweghị m ike ịnabata ọnọdụ ndị ahụ. >
< start="35.87" dur="3.53"> Ekwetaghị m na onye ozi ọ bụla na-akwanyere onwe ya ùgwù ga-anabata ọnọdụ ndị dị otú ahụ >
< start="39.41" dur="3.25"> ya mere, ya mere, enwere m mmetụta kachasị mma ime bụ ịga. >